पालिका गीतसम्बन्धी मेरा कुरा – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
पालिका गीतसम्बन्धी मेरा कुरा
२४ बैशाख २०७९, शनिबार ०८:३६
✍️ शम्भु निरौला
त्यस दिन मनमा अलि खुल्दुली बढेको थियो, चासो चस्केको थियो । हुटहुटी जागेको थियो । मन उद्वेलित थियो । जिज्ञासा जागेको थियो । त्यसो हुनाको कारण एउटै थियो, त्यो दिन थुलुङदूधकोशी गाउँपालिकाको पालिकागान सार्वजनिक निजी सार्वजनिक हुने दिन, नयाँ खेलमैदान उद्घाटन गर्ने दिन थियो । अध्यक्ष–कप भलिबल खेल आरम्भ हुने दिन पनि थियो । त्यसैले म त्यतापट्टिको खबर सुन्न आतुर थिएँ ।
निर्णायकमण्डलले कसको गीत छनौट गर्ला त भन्नेमै म बेचैन थिएँ । कारण मैले पनि कनिकुथी एउटा गीत लेखेर पालिकाको विद्युतीय ठेगानामा पठाएको थिएँ । त्यसैले पनि चासो बढेको होला । मैले थाहा पाएँ, मेरो गीत छनोट भएन । त्यसपछि तुरुन्तै महसुस गरिहालेँ कि मेरो रचना राम्रो भएन । गीत गीतजस्तो भएन । छनोटमा मेरो गीत परेन । परी पो हाल्छ कि भन्ने ठान्नु स्वाभाविकै थियो ।
छनौट समितिले युवा साहित्यकार सुवास संगमको रचनालाई उत्कृष्ट ठहराएछ । रेकर्ड भएछ । त्यसैलाई गाउँपालिकाले भव्य समारोहका माझ सार्वजनिक ग¥यो । गीत घन्क्यो । आफ्नो पालिकाको चिनारी गान बज्दा मन खुसीले गदगद भयो ।
उनको बारेमा जान्ने उत्सुकता बढ्यो । मोबाइल निकालेँ । फोर जी अन गरेँ । टाइप गरिहालेँ-सुवास संगम । ठ्याक्कै देखापरिहाले उनी । मेरो उद्देश्य थियो–मित्रताका लागि अनुरोध पठाइहाल्ने तर उनी र म पहिल्यै जोडिएका रहेछौं । त्यहाँ मैले अंग्रेजीका तीनवटा शब्द देखेँ-लिरिसिस्ट, पोयट र राइटर । उनी हामी थुलुङदूधकोशी गाउँपालिकावासीका लागि उनी गौरव हुन् । उनको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अघि बढिरहोस् म यही कामना गर्दछु ।
अब कुरा गरौं थुलुङदूधकोशी गाउँलालिकाको पालिका गानसम्बन्धी । युवा सहित्यकार सुवास संगम राईद्वारा रचित पालिका गानका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म टिकाटिप्पणी गर्दैछन् । गीत राम्रो छ । कर्णप्रिय छ । सलस बगेको छ दूधकोशी जस्तै । अनुप्रास मिलेको छ । विविध भाषा, धर्म, संस्कृति र जातिलाई एकमुस्ट समेटिएको छ । यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई उजागर गरिएको छ । सिद्धहस्त गीतकार, साहित्यकार तथा लेखक सुवास संगम राईको प्रस्तुत पालिका गीत सफल छ ।
अबअर्को पाटो खोतलौं । यस किसिमका गीतमा सर्जकको निजात्मक भावनाभन्दा वस्तुपरक दृश्य छर्लंगिनुपर्छ । सो गाउँपालिकाको गीत सार्वजनिक भएसँगै श्रोताहरूबाट पहिलो प्रतिक्रिया के आयो भने गीतको एउटा हार अर्कै गीतबाट सुटुक्क लिइयो । नेचा महोत्सव हुँदा तयार पारिएको उक्त हरफ यो गीतमा समेटिँदा श्रोतावर्गबाट प्रतिक्रिया आउनु सामान्य कुरा हो र स्वाभाविक पनि हो । मेरो ठम्याइ चाहिँ के छ भने यो हरफ उनले कपी गरेको होइनन् । सफल सर्जकमा स्थापित व्यक्तित्व सुवास संगमलाई यति कुरा अर्काको रचनाबाट लिनुपर्ने बाध्यता पर्दैन ।
त्यसैले म सुनिश्चत छु कि यो गीत (शिरमाथि सगरमाथा पाउमा दूधकोशी) को हरफ उस्तै हुनु केवल संयोगमात्र हो । यसबारे अझ स्पष्ट पार्दै प्राज्ञ डा.भक्त राई भन्छन्, ‘सर्जकले सिर्जना गर्दा एउटै विषय, क्षेत्र वा भावको ववर्णन गर्ने क्रममा कतिपय शब्दहरू उहीँ वा उस्तै आउँन पनि सक्छन् ।’ त्यसैले हामी यो कुरामा निश्चिन्त हुनुपर्छ कि उनले यो हरफ संयोगमात्र हो । जानीबुझीकन तानेको कदापि होइन ।
अब म के भन्छु भने यो हरफ यस गीतमा समेट्नु कति युक्तिसंगत छ त ? कति सान्दर्भिक लाग्ला त ? मलाई लाग्छ सान्दर्भिक छैन । सगरमाथा हाम्रो गाउँपालिकाको मात्रै कसरी शिर हुनसक्छ । यो त नेपालको शिर हो । समस्त पालिकाकै शिर हो । विश्वकै माथ हो । पाउमा दूधकोशी भन्नु ठीकै किनभने थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका दूधकोशी उपत्यकाभित्रै पर्छ । फेदबाट बगेको छ । फेदलाई पाउ भनियो मिल्दो नै छ ।
पालिकागानले विशेष चिनारी दिनुपर्छ । यसभित्रका खासखास कुरालाई देखाउनुपर्छ । पर्यटकीय स्थल सुकेपोखरी नसमेटिनु, धार्मिक आस्थाका केन्द्र जालिमदेवी र ठकुमालादेवी नअट्नु, सांस्कृतिक सम्पदा जस्तै गुम्बा, भूमेपूजा, देवाली, मारुनी, संगिनी, लादी नलेखिनु भनेको गीतकारको कमजोरी हो ।
गीतमा फुल्युकु भन्ने शब्द छ । यसको शाब्दिक अर्थ त के हो मलाई थाहा छैन । मलाई के थाहा छ भने यो ठाउँको नाउँ हो । थुदुगापाको सदरमुकामभन्दा मास्तिर पर्छ । यसैलाई गीतकारले शिरोपर भनेका छन् । शिरोपर भनेको के हो ? उनको शिरोपर शब्दले सबैभन्दा माथिको भन्ने बुझाउँछ । जिज्ञासा के हो भने शिरोपर शब्दले माथि बुझाउँछ त ?
यस गीतमा नपर्नुपर्ने एउटा हरफ परेको छ । त्यो यो हो :
‘नयाँ युगको रचनाकार, नेतृत्व छ यही ठाउँमाझ’
यो हरफको औचित्य कसै गर्दा नि पुष्टि हुँदैन । यो सरसर राजनीतिक कुरा हो । पालिका गानमा यस्ता प्रसंगले ठाउँ पाउनु हुँदैनथ्यो । यहाँ गम्भीर त्रुटि भयो । मान्छेले गीतको यो बोल सुन्नेबित्तिकै ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली…….’ सम्झिन सक्छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ : एउटै नेतृत्व सधैं रहन्छ त ? पक्कै रहँदैन । पालिका गान फेरिइरहन्छ त ? यो त फेरिँदैन । गीत यही हुन्छ सदाका लागि । अनि जो नेतृत्व आए पनि नयाँ युगको रचनाकार भनिरहने । गाइरहने यो मिलेन । छनौट समितिले यति कुरा देख्नु पथ्र्यो । छनौट भइसकेपछि सर्जलाई यो हरफ संशोधन गर्न सुझाउनु पथ्र्याे ।
प्रस्तुत पालिका गानमा वर्णविन्यासगत त्रुटि धेरै छन् । सामान्य ह्रस्वदीर्घको नियमलाई बेवास्ता गरिएको छ । गीतका अन्तिम हरफमा भने थुदुगापाका सबै वडाका गाउँको नाम उल्लेख गरिएका छन् ।
गीतकार राई हाम्रा गौरव हुन् । आगामी दिनहरूमा उनको साहित्यिक यात्रा अझ सशक्त बन्दै जानेछ । नेपाली साहित्याकाशका उज्ज्वल नक्षत्र राईलाई हार्दिक शुभकामना तथा बधाई !
एनएमबीकोे मुद्दतीमा डबल प्रतिफल
काठमाडौंको तिलिङगेटारमा एक जना